काठमाडौंकै ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक 'हाटा' अर्थात हाजिर गर्दै टाप कस्दै ! - Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौंकै ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ‘हाटा’ अर्थात हाजिर गर्दै टाप कस्दै !
शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार अनुगमन गरिएका विद्यालय मध्ये केहीमा ८० प्रतिशतसम्म शिक्षक अनुपस्थित भेटिए । विभागले आधादर्जन भन्दा बढी स्कुलमा अनुगमन गरेको थियो । ती विद्यालयमा २३ जना शिक्षक अनुपस्थित भेटिए । अनुगमन गरिएका विद्यालयको नाम भने खुलाइएको छैन ।
‘कुनै एक विद्यालयमा कक्षा नौ र दशको पढाइ बिहान हुँदो रहेछ । बिहान ६ बजेर तीस मिनेटमा स्कुल सुरु हुनुपर्ने रुटिन बने पनि साढे सात बजेसम्म पनि शिक्षकहरू देखेनौं’, कोइरालाले भने, ‘हामी जाँदा दुई चार विद्यार्थी खेलिरहेका थिए । विद्यालय आउनु पर्ने शिक्षक मध्ये असी प्रतिशत अनुपस्थित थिए ।’
शिक्षक नदेखेपछि प्रधानाध्यापक मार्फत ती शिक्षकलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण पठाइएको छ । स्पष्टिकरण चित्त नबुझे विभागीय कारवाही गर्ने महानगरको तयारी छ । महानगरपालिकाभित्र ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् ।